अरुको नामकाे सिमकार्ड चलाउँदै हुनुहुन्छ ? अब प्रयोग गर्न पाइन्न - Birgunj Sanjalअरुको नामकाे सिमकार्ड चलाउँदै हुनुहुन्छ ? अब प्रयोग गर्न पाइन्न - Birgunj Sanjalअरुको नामकाे सिमकार्ड चलाउँदै हुनुहुन्छ ? अब प्रयोग गर्न पाइन्न - Birgunj Sanjal
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार ०२:२१
तोकिएको समयमा पनि आफ्ना नाममा सिम दर्ता नगर्नेलाई के गर्ने भन्ने निर्णय भने भइनसकेको उनले बताए। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपाल टेलिकमबाट असारसम्ममा २ करोड २ लाख सिमकार्ड जारी भएका छन् भने एनसेलले एक करोड ६६ लाख सिमकार्ड जारी गरेको छ। याे खबर आजकाे कान्तिपुर दैनिकमा छ।